Shiinaha Customized giraanta saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Angel Dharka Qalabka Qalabka Co., Ltd.
Hoyga > Badhan > Badhanka birta > Xadhig
Suunka suunka, sidoo kale loo yaqaan suunka suunka, madaxa maqaar, madaxa dhexda, suun, wax guud ahaan waa saafi ah saafi ah, daawaha zinc, steel, daawaha titanium, iwm, isticmaalka heerkulka sare dhalaalay shubay qaboojinta.
2. Xuduudaha alaabta eeXadhig:
Belt Xadhig Manufacturers Wholesale Cheap Custom Fashion Men Metal Belt Xadhig For Belt
niiko bilaa xor ah ama la habeeyay
dharka / boorsada / kabaha / suumanka
tayo sare leh, qiimo toos ah warshad
la heli karo haddii kharashka qaaliga ah la bixiyo
Waqti Gaarsiinta Muunad
3-7days waxaa qoray DHL / UPS / Fedex / TNT
100pcs, amar badan oo aan ka yarayn 500RMB foritem
1-2 usbuuc oo xagga hawada ah, bad ahaan ama soo qaadista combiantion
TALO: 1. Cabbirka macaamiisha, midabbada, qaababka dhammaantood waa la aqbali karaa, iwm. 22ODM ama OEM waa la heli karaa. Amarka isku darka waa la aqbali karaa.
Maxay macaamiisha ka taxadaraan:
Xarkaha suunka waxaa loo qaybin karaa suunka suunka maalinlaha ah, birta suunka nooca ukunta, birta suunka wareega nuska ah, D nooca suunka xirmada, birta suunka nooca wareega ah, birta suunka nooca wareega ah, birta suunka nooca elliptical.
Tilmaamaha wax soo saarka eeXadhig:
4. Baako iyo gaadiid
Faa'iidooyinka wax soo saarka eeXadhig:
Suumanka suunku wuxuu leeyahay codsiyo kala duwan, oo ku lug leh dharka, boorsooyinka, suumanka, suumanka, xargaha iyo meelaha kale, waxay ciyaaraan doorka foosha iyo dhejinta, iyadoo isbeddelka The Times, laakiin sidoo kale loo beddelay mid ka mid ah waxyaabaha moodada dharka ka mid ah.
J: Haa, waxaan nahay warshad, oo ku taal Dongguan, GuangdongProvince of China.
Q2: Miyaad aqbali kartaa alaabtayda astaanta u gaarka ah?
J: Haa, fadlan soo dir shaybaarkaaga asalka ah ama sawir gacmeedyada, ka dibna waxaan u tagi karnaa madaxa si aan u hubino faahfaahinta faahfaahin dheeri ah iyo sidoo kale qiimaha ugu fiican, rarka, qaabeynta iwm.
S3: Sideen ku heli karaa shay-baarka?
A: Waxaan ku siin karnaa muunad alaabooyin bilaash ah oo jira si aad u qiimeyso. Badanaa iyada oo loo marayo xawaaraha, sida DHL, Fedex, UPS, TNT iwm, xamuul ayaa la soo ururiyay.
Q4: Immisa ayaad ka qaadan doontaa dhismaha cusub ee la cusboonaysiiyay?
A: Sheyga OEM / sheyga loo habeeyay, wasakh cusub ayaa loo baahan yahay si loo soo saaro.
Caadi ahaan USD60 naqshad, loogu talagalay suun ku xiran naqshadda iyo cabbirka. Laakiin qiimaha caaryada waa la soo celin karaa marka wadarta amarrada qty ay la kulmi karaan sanad gudihiis.
J: Haa, waxaan ku bixin karnaa shaybaarro bilaash ah. Shaybaar-soo-saarka hore-sidoo kale waa la heli karaa haddii loo baahdo (xamuul xamuul ah) oo adiga laguu oggolaado & tijaabiyo. Amarada ayaa bilaaban doona markii laguu xaqiijiyo.
Q6: Mudo intee leeg ayaa loo baahan doonaa wax soo saar?
J: Caadi ahaan 7-10 maalmood amar yar oo loo habeeyay / sheyga OEM, iyo 12-20 maalmood wax soo saarka bulk-ga ah sida qty aad tahay.
Q7: Waa maxay habka maraakiibta?
J: Amar yar, gaarsiinta xawaaraha caalamiga ah, suchas DHL, UPS, DHL, Fedex iwm.
Si aad u ballaaran, u kala rarid markab ama diyaarad. Ama sidoo kale waa lagu kala saari karaa codsigaaga.
S8: Waa maxay waqtigaaga hogaaminta?
A: Shayga la habeeyay, waqtigeenna hoggaamineed waa 12-15 maalmood. Waxyaabaha degdegga ah, waxaan sidoo kale riixi karnaa & gaarsiin karnaa ASAP
Indhoolayaasha birta ah